MCN နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၉ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား နစေ့ဉျ ရုပျသံအစီအစဉျ (ညနပေိုငျး) MCN နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၉ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ
MCN နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၉ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ
မင်္ဂလာပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နေ့စဉ်သတင်း အစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ ရှုစားကြရမယ့် သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ . . .
● သေဒဏ်ချခံထားရတဲ့ ဝင်းနဲ့ဇော် အတွက် အသနားခံစာတင်ရေး ထိုင်းရှေ့နေကောင်စီနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့
● တိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်သားပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ရှိ
● ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ မြန်မာနဲ့ ကာဂျစ္စတန်တို့ ယှဉ်ပြိုင်မယ်
စတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ အခြားထူးခြားတဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်ျဂလာပါ။ MCN သတငျးဌာနရဲ့ နစေ့ဉျသတငျး အစီအစဉျက ကွိုဆိုပါတယျ။ ဒီကနေ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၉ ရကျ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ အတှကျ နောကျဆုံးရရှိထားတဲ့ သတငျးတှကေို တငျဆကျပေး သှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာ ရှုစားကွရမယျ့ သတငျးတှမှောဆိုရငျတော့ . . .
● သဒေဏျခခြံထားရတဲ့ ဝငျးနဲ့ဇျော အတှကျ အသနားခံစာတငျရေး ထိုငျးရှေ့နကေောငျစီနဲ့ ဆှေးနှေးခဲ့
● တိုငျးရငျးသားဘာသာ စကားသငျကွားနတေဲ့ ကြောငျသားပေါငျး တဈသောငျးကြျောရှိ
● ၂၀၂၂ ကမ်ဘာ့ဖလား ခွစေဈပှဲ မွနျမာနဲ့ ကာဂစ်ြစတနျတို့ ယှဉျပွိုငျမယျ
Previous articleMCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၉ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Next articleချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးရင် စပါး ကစားသမားတွေ လုပ်ခ ဆုကြေး လျော့ခံရဖွယ်ရှိနေ